Namoota Allaamaaxaa irraa buqqa’aniif deeggarsi gahaan dhiyaachaa hin jiru jedhame – ዜና ከምንጩ
Namoota Allaamaaxaa irraa buqqa’aniif deeggarsi gahaan dhiyaachaa hin jiru jedhame
Haleellaa tibbana ABUT baneen namoonni Raayyaa Allaamaaxaa irraa buqaa’uun Qobboo qubatan deeggarsi dhiyaachaafii akka hinjirre himaniiru.
Guyyoota muraasaan dura raayyaan ittisaafi humni addaa Amaaraa naannawicha gadi lakkisee erga ba’ee booda hidhattoonni ABUT naannawicha too’atanii turan.Jijjiirama hineegamne kana booda jiraattoonni lubbuusaaniitiif yaadda’an Allaamaaxaa keessaa ba’uun magaalaa Qobboo dhiyeenyatti argamtu galanii turan.
Addis Maaladaan jiraattoota Qobboo qubatan akka dubbiftee hubattetti taanaan buqqaatoota kanaaf gama mootummaatiin deeggarsi taasifameef hin jiru.
Wayita ammaa rakkoo tasgabbii naannawicha jiruun gara iddoo jireenyaatti deebi’uuf yaaddoo nagaa akka qaban kan himan buqqaatoonni kun deeggarsa namoomaa malees dhimmi nagaa akka isaan yaaddesse himan.
Kanaaf mootummaan naannoofi Federaalaa gara iddoo jireenyaa keenyatti nudeebisuun jireenya fuulduraatiif kallattii nuuf kaa’uu qabu jechuun gaafataniiru.Itti dabaluunis dhimma nagaafi tasgabbiitiif xiyyeeffannoon kennamee akka hojjetamuuf buqqaatoonni gaafataniiru.
‘Buufata Qobboo amma keessa jirutti nuufi ijoolleen keenya yaaddoo nagaa malees deeggarsa namoomaa argachaa hinjirru’kan jedhan yoo ta’u qayeesaanii saffisaan gadi lakkisanii waan ba’aniif uffata uffatan dabalatee waan sorataaf ta’u argachaa hinjirru jedhaniiru.
Addis Maaladaanis komii buqqaatotaa kana qabachuun kanttibaa Magaalaa Kaasaa Raddaa dubbiftee jirti.Kantiibichi gaaffii dhiyaateef yoo deebisan komiin buqqaatoonni dhiyeessan sirriidha jechuun deeggarsi namoomaa dhiyaachaa jiru gahaa akka hintaane dubbataniiru.
Haata’u malee buqqaatoota hundaaf hamma humni hayyameen deeggarsi nitaasifamaaf jechuun deebii kennaniiru.
Buqqaatonni gara iddoo jireenyaatti yoo deebine nagaa keenyaaf ni yaaddofna jechuun komii kaasaniifis mootummaan naannawicha waan too’ateef yaaddoon nagaa akka hinjirre himaniiru.
Walqabsiisuunis humni addaa naannoo Amaaraa humnoota tasgabbii kanneen biroo wajjin ta’uudhaan Allaamaaxaafi naannawashii akka too’atan ibsuun buqqaatoota gara iddoo jireenyaatti deebisuuf gurmaa’uudhaan hanga ka’anitti eegna jedhaniiru.
Jiraattoonni magaalaa Allaamaaxaa amma Qobboo jiran deeggarsa gahaa argachuu baatanis mootummaan Allaamaaxaa waan bilisoomseef ummanni tasgabbaa’uun gammachuurra akka jiru hubatamaa akka jirus kantiibichi eeraniiru.
Gaaffiin buqqaatotaa kanaan dura raayyaan ittisaafi humni addaa gara magaalaa nuuf haagalan kan jedhu malee gaaffii nyaataafi dhugaatii akka hinturre himan.
Itti gaafatamaan komishiinii hooggansa hojii yaaddoo ittisa balaa Dabbaba Zawudee gamasaaniitiin jeeqamasa tibbana gareen ABUT uumeen deeggarsi namoomaa akka hindhaqqabneef guufuun uumamee akka ture Addis Maaladaatti himaniiru.
Sababoota kanneen fakkaataniin buqqaatotaaf deeggarsa gahaa taasisuun akka hin danada’amne eeruun komishiinii hooggansa hojii yaaddoo balaa magaalaa wajjin mari’achuun kallattii furmaataa nikeenya jedhan.
Murtee qofaatti dhukaasa dhaabuu mootummaan Federaalaa labse booda naweereree jira kan jedheen garee ABUT haleeluu akka jalqabe mootummaan Naannoo Amaaraa akka beeksise niyaadatama.
ABUT dogongora isaa irraa barachuun ummata balaa hammaataa irraa baraaruu utuu qabuu bulchiinsawwan Naannoo Amaaraa akka weerare waajjirri dhimmoota komunikeeshinii naannichaa ibsa baaseera.
Miseensonni milishaafi humni addaa naannoo Amaaraa gocha weerara hidhattoota ABUT malaan ittisuuf carraaqaa akka turan ibsuun obsi kana caale balaa ol’aanaa waan hordofsiisuuf ittisuurra dabarree qolachuu jalqabneerras jedhameera.
Total views : 5876352